The Ab Presents Nepal » पृथ्वीनारायण शाहलाई धेरै धूपबत्ति गरिरहनुपर्दैन– डा. भट्टराई
‘१८ औं शताब्दीको चेतनामा उनले गरिब राज्य गोरखा राज्यविस्तार गरेका हुन्, जुन प्रकारान्तरले वर्तमान नेपाल राज्य बन्न पुग्यो,’ डा. भट्टराईले माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘राम्रै भयो ! त्यहि रुपमा उनलाई सम्झे पुग्छ । धेरै धूपबत्ति गरिरहनुपर्दैन !
पृथ्वीनारायण शाहले एक जना किशानको उखु चोरेर खाएको प्रसंग पनि आफ्नो ट्वीटमा उल्लेख गरेका छन् । ‘दरौंदीमा खेल्दा भोकाएर केशव द्वारेको उखु चोर्न बाध्य पृनाको आत्मालाई खुसी पार्ने हो भने उनको जन्मदिनमा छुट्टी हैन, १२ घण्टा काम गरेर देशलाई धनी बनाऊँ, अर्कोतिर त्यसबेलाको चेतनामा संघीय राज्य सम्भव थिएन । गाली पनि नगरौं ।